Imaatinka Eden Hazard Waxa Uu Igu Adkaynayaa In Aan Ciyaaro, Wax Walba Zinedine Zidane Ayay Ku Xidhan Yihiin. - Gool24.Net
Imaatinka Eden Hazard Waxa Uu Igu Adkaynayaa In Aan Ciyaaro, Wax Walba Zinedine Zidane Ayay Ku Xidhan Yihiin.
Heshiiskii ay Real Madrid kula soo wareegtay Eden Hazard cidkasta oo Bernabeu ka tirsanayd muu farxad galin waxaana jira xidigo uu galaafanayo doorkii fiicnaa ee ay ka soo ciyaareen kooxdooda Madrid.
Saamaynta ugu horaysa ee imaatinka Eden Hazard waxay taabanaysaa da’yarka saamaynta fiican soo yeeshay ee Vinicius Junior kaas oo qirtay in imaatinka xidiga reer Belgium ee Madrid ay ku adkaynayso in uu ciyaaro.
Vinicius Junior ayaa Real Madrid ka soo muuqday xili ciyaareedkii la soo dhaafay isaga oo bilawgii kooxda Casilla waqti badan ku soo qaatay laakiin waxa uu ugu danbayn lugaha la helay Bernabeu isaga oo boos joogta ah ka helay shaxdii Santiago Solari.
Vinicius Junior ayaa dhawaan qirtay in sanadkii uu Madrid joogay uu horumar u sameeyay inka badan muddadii uu dalkiisa Brazil ka soo ciyaaray laakiin horumarkiisii waxaa duulaan ku ah Eden Hazard sida uu isaga laftiisu fahansan yahay.
Vinicius Junior ayaa waraysi uu siiyay Globoesporte waxa uu ku qirtay in imaatinka Hazard uu xalaadiisa adkaynayo balse waxa uu arinta ku wareejiyay go’aanka uu Zidane gaadhi doono.
Vinicius Junior oo imaatinka Hazard ka hadlaya ayaa yidhi: “Imaatinkiisu (Hazard) waxay aniga igu adkaynaysaa in aan ciyaaro, laakiin dhibaato kuma qabo wax walba waxay ku xidhan yihiin Zidane”.
“Markii aan imid waxaan ahaa ciyaartoy gabi ahaanba ka duwan, wax badan ayaan halkan kaga bartay shaaalaha iyo tababare kastaba, tatiko ahaan ayaan horumar u sameeyay, wax yar ayaan kubbada luminayaa, waan deganahay marka aan ciyaarayo” ayuu Vinicius Junior hadaliisa raaciyay.
Vinicius Junior ayaa booska garabka bidix ee weerarka uga soo ciyaaray Real Madrid halkaas oo uu saamayn xoogan ku lahaa waqtigii Solari laakiin imaatinka Eden Hazard waxa uu marka kowaad gabi ahaanba meesha ka saarayaa fursadii uu Vinicius uga ciyaari lahaa garabka weerarka bidix.
Sidoo kale waxaa la filayaa in Zidane aanu fursadii Solari oo kale siin doonin Vinicius Junior maadaama oo uu la soo saxiixday Luka Jovic isla markaana uu weerarka ku haysto Karim Benzema.
Vinicius Junior oo kaliya saamayn kuma yeelanayo Eden Hazard balse waxaa la mid ah Lucas Vazguez, Mariano Diaz iyo Marco Asensio kuwaas oo aan dhamaan shaxda Zidane isku hubin in ay fursad ka heli karaan.